KARIERA ANY AMBATONDRAZAKA | NewsMada
KARIERA ANY AMBATONDRAZAKA
Tsy manaiky ho very anjara Rakotoarimanana Matthieu
Araka ny fantatra, efa any Ambatondrazaka indray amin’izao fotoana izao ny zanaky ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery manara-maso sy tonga haka ny anjarany amin’ireo karierana safira any an-toerana. Tsy vao voalohany no nahenoana ny anaran-dRakotoarimanana Rajaonarimampianina Matthieu tany amin’ny toerana ity fa efa maromaro izay…
Raha tsiahivina, efa nandalo tao amin’ny filan-kevitry ny minisitra tamin’ny 9 novambra 2016 ny mikasika ireo kariera izay ao anaty ala arovana any Ambatondrazaka saingy tsy misy dikany izany filan-kevitry ny minisitra izany rehefa ny zanaky ny filoha no mametraka olona hiasa ao amin’ireo toerana ireo. Araka ny fantatra mantsy, tsy misy olona tsy mahita any an-toerana ny nahatongavan-dRakotoarimanana Matthieu ny talata lasa teo. Namantana avy hatrany tao amin’ny hotely « trois cocotiers » ity zanaky ny filoha Rajaonarimampianina Hery ity ary mbola any izy hatramin’ny omaly hariva nanoratanay.
Tsy mbola fantatra izay tena anton-dian’ity zanaky ny filoha ity any an-toerana amin’izao fotoana izao, saingy raha ny tantara efa lasa, azo antoka fa mikasika ireo kariera any an-toerana na Bemainty na Ididy izay efa samy nidirany avokoa no anton-diany any.
Araka ny fantatra, tamin’ny dian’ity zanaky ny filoha ity voalohany tany an-toerana dia misy olona solotenany (toy ny tany Anjozorobe teo aloha) napetrany tany amin’ireo kariera ireo. Ireo olona ireo indray avy eo no mitady izay mpiasa hiasa ho azy. Azo heverina araka izany fa haka ny anjarany tany amin’ireo solotenany ireo no ahatongavan’i Matthieu any Ambatondrazaka amin’izao.
Ny famptam-baovao avy tany amin’ny karieran’Ididy ihany koa no nahalalana fa olona manodidina ny 400 eo ho eo no miasa ao amin’ity toerana ity amin’izao fotoana izao. « Anarana fotsiny sisa ny maha-ala arovana io toerana io fa efa tena potika tanteraka eo amin’ny toeram-pitrandrahana. Mijery fotsiny manoloana izany na ny tompon’andraikitra eto an-tanàna na ny tompon’andraikitra eo anivon’ny fanjakana foibe », hoy ihany ny fampitam-baovao avy tany an-toerana. Tsy misy azo atao marina rehefa ny zanaky ny filoha no miditra an-tsehatra.
Hatreto, tamin’iny filan-kevitry ny minisitra tamin’ny 9 novambra 2016 iny no niresahan’ny tompon’andraiki-panjakana, ireo minisitra, farany ny mikasika ity kariera any Ambatondrazaka ity. Hatramin’izao dia nangina tanteraka tsy nandrenesam-peo intsony ny mpitondra ary manao izay danin’ny kibony ny mpitrandraka.
Mbola feno Sri-lankais
Araka ny loharanom-baovao voaray hatrany, na dia efa namoaka didy aza ny lehiben’ny prefektiora tany Ambatondrazaka amin’ny tokony hialan’ireo teratany Sri-lankais, mpividy vato any an-toerana, fantatra amin’izao fa mbola feno azy ireo any an-toerana.
« Mbola misy manodidina ny 150 eo ho eo izy ireo no aty an-toerana amin’izao fotoana izao. Ary tsy misy mipetraka amina hotely na iray aza fa tranon’olon-tsotra no hofain’izy ireo mba hialany amin’izay mety fisavana tampoka », hoy ihany ny tsilian-tsofina voaray avy tany an-toerana.
Misy olona ambony miaro azy ireo, hoy ihany ny loharanom-baovao, mba tsy hialany any an-toerana. Ireo olona mpiaro ireo no mahita ny trano misy azy ireo tsirairay avy ka misy fotoana itetezan’izy ireo trano mihitsy. Ny azo antoka dia tsy famangiana tsotra fotsiny izany.